ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှူ့မတူတဲ့လူနှစ်ယောက်ချစ်ကြိုက်မိရင် ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့တက်ကြတဲ့ ဒီနိုင်ငံကလူတွေအကြောင်းပြောပြလာတဲ့ မြတ်သူသူ – Cele Top Stars
ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သတ်ကြီးရေ နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို အဆိုတော်တစ်ယောက် လည်းဖြစ်တဲ့ မြတ်သူသူကတော့ သူမရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ မလျော့သောဇွဲလုံ့လတို့ကြောင့် တစ်နေ့တစ်ခြားအောင်မြင်လာခဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဟန်ဆောင်မှုမရှိ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေတတ်တဲ့မြတ်သူသူက မဟုတ်မမှန်တာတွေ့ရင် ဖွင့်ပြော တတ်သူဖြစ်ပြီး ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း မြတ်သူသူက ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုခြင်းမတူညီတဲ့လူနှစ်ယောက် ချစ်ကြိုက်မိရင် ဒီနိုင်ငံမှာ အပြောအဆိုမလွတ်ကြောင်းကို အခုလိုပဲ ပြောပြလာပါတယ်..။
“ ဒီနိုင်ငံမှာကလေ လူအများစုက သာမာန် မိန်းကလေးတယောက် ဒါမှမဟုတ် ယောင်္ကျားလေးတယောက်က သူ့ထက် အဆင်ပြေတဲ့ ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်နဲ့များ တွဲကြည့်ပါလား.. အမလေး တကယ်ချစ်တာ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲခြူစားနေတာ ပိုင်းလုံးလုပ်နေတာ အချိန်တန်ထားခဲ့ခံရမှာ ဘာညာသရကာပေါင်းစုံနဲ့ ပြောထွက်ကြတာ။ သူတို့ပြောတဲ့ အချစ်ဆို တာမျိုးက နိမ့်ကျတဲ့သူနဲ့တွဲမှ တကယ့်အချစ်စစ် အဆင်ပြေတဲ့သူနဲ့တွဲမိရင် ပိုင်းလုံးခြူစား ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာက ဘယ်လိုအခြေအနေ အဆင့်အတန်း အသက်အရွယ်မှာမဆို ပေါ်တတ်တာပဲမလား ဘာထူးဆန်းလို့လဲလေနော် မသိရင် သူတို့ယူရမယ့်သူအတိုင်းပဲ သူတို့ကအကုန်သိသလိုဝိုင်းဝေဖန်နေကြတာသူတို့ကပဲ တအိမ်ထဲနေကြသလိုလို အကုန်သိ အဲ့ဒါဘာလဲ သိလား ? မုဒိတာမပွားနိုင်တာ။
အဆင်မပြေနိမ့်ကျနေရင်သာ သနားပါတယ်ဟယ်ဆိုပြီးပြောထွက်သေးပေမယ့် အဆင်ပြေလာရင် မနာလို မရှုစိမ့် မုဒိတာမပွားနိုင်တဲ့ သေးသိမ်တဲ့ စိတ်တွေ ပေါ်လာတာပဲ ။ ရှက်တတ်ကြစမ်းပါ လူတိုင်းက သူ့အကျိုးပေးနဲ့သူပဲကို မြင်တွေ့နေရတာ အဆင်ပြေမနေဘူး ကိုယ့်စိတ်ထားအတိုင်း ကိုယ့်ကံက အကျိုးပေးသွားမှာ ” ဟုဆိုပြီး ပြောလာပါတယ်။မြတ်သူသူကတော့ ချီးကျူး (၇) ရက်၊ ကဲ့ရဲ့ (၇) ရက်ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ဒီနိုင်ငံမှာ ကိုယ့်ထက်ချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ ချစ်ကြိုက်မိရင် အပြောအဆိုမလွတ်ကြောင်း ပြောပြလာ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖတ်ရှူ့ပေးကြတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
ခဈြလှစှာသော ပရိတျသတျကွီးရေ နာမညျကွီးသရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈသလို အဆိုတျောတဈယောကျ လညျးဖွဈတဲ့ မွတျသူသူကတော့ သူမရဲ့ ကွိုးစားအားထုတျမှုနဲ့ မလြော့သောဇှဲလုံ့လတို့ကွောငျ့ တဈနတေ့ဈခွားအောငျမွငျလာခဲ့သူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ ဟနျဆောငျမှုမရှိ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးနတေတျတဲ့မွတျသူသူက မဟုတျမမှနျတာတှရေ့ငျ ဖှငျ့ပွော တတျသူဖွဈပွီး ဒီတဈခေါကျမှာလညျး မွတျသူသူက ငှကွေေးပိုငျဆိုငျမှုခွငျးမတူညီတဲ့လူနှဈယောကျ ခဈြကွိုကျမိရငျ ဒီနိုငျငံမှာ အပွောအဆိုမလှတျကွောငျးကို အခုလိုပဲ ပွောပွလာပါတယျ..။
“ ဒီနိုငျငံမှာကလေ လူအမြားစုက သာမာနျ မိနျးကလေးတယောကျ ဒါမှမဟုတျ ယောကငြ်ျားလေးတယောကျက သူ့ထကျ အဆငျပွတေဲ့ ခမျြးသာတဲ့လူတယောကျနဲ့မြား တှဲကွညျ့ပါလား.. အမလေး တကယျခဈြတာ ဘယျဟုတျပါ့မလဲခွူစားနတော ပိုငျးလုံးလုပျနတော အခြိနျတနျထားခဲ့ခံရမှာ ဘာညာသရကာပေါငျးစုံနဲ့ ပွောထှကျကွတာ။ သူတို့ပွောတဲ့ အခဈြဆို တာမြိုးက နိမျ့ကတြဲ့သူနဲ့တှဲမှ တကယျ့အခဈြစဈ အဆငျပွတေဲ့သူနဲ့တှဲမိရငျ ပိုငျးလုံးခွူစား ခဈြခွငျးမတ်ေတာဆိုတာက ဘယျလိုအခွအေနေ အဆငျ့အတနျး အသကျအရှယျမှာမဆို ပျေါတတျတာပဲမလား ဘာထူးဆနျးလို့လဲလနေျော မသိရငျ သူတို့ယူရမယျ့သူအတိုငျးပဲ သူတို့ကအကုနျသိသလိုဝိုငျးဝဖေနျနကွေတာသူတို့ကပဲ တအိမျထဲနကွေသလိုလို အကုနျသိ အဲ့ဒါဘာလဲ သိလား ? မုဒိတာမပှားနိုငျတာ။
အဆငျမပွနေိမျ့ကနြရေငျသာ သနားပါတယျဟယျဆိုပွီးပွောထှကျသေးပမေယျ့ အဆငျပွလောရငျ မနာလို မရှုစိမျ့ မုဒိတာမပှားနိုငျတဲ့ သေးသိမျတဲ့ စိတျတှေ ပျေါလာတာပဲ ။ ရှကျတတျကွစမျးပါ လူတိုငျးက သူ့အကြိုးပေးနဲ့သူပဲကို မွငျတှနေ့ရေတာ အဆငျပွမေနဘေူး ကိုယျ့စိတျထားအတိုငျး ကိုယျ့ကံက အကြိုးပေးသှားမှာ ” ဟုဆိုပွီး ပွောလာပါတယျ။မွတျသူသူကတော့ ခြီးကြူး (၇) ရကျ၊ ကဲ့ရဲ့ (၇) ရကျဆိုတဲ့ စကားအတိုငျး ဒီနိုငျငံမှာ ကိုယျ့ထကျခမျြးသာတဲ့သူနဲ့ ခဈြကွိုကျမိရငျ အပွောအဆိုမလှတျကွောငျး ပွောပွလာ တာပဲဖွဈပါတယျ။ဖတျရှူ့ပေးကွတဲ့ပရိတျသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော..။